Nsogbu Nsogbu asaa na Social Commerce | Martech Zone
Nsogbu Nchịkọta asaa na Social Commerce
Ahịa azụmahịa aghọwo nnukwu okwu, ma ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ejide "na-elekọta mmadụ" na ịzụta na ire ha. Gịnị kpatara nke a?
Maka otu ihe kpatara ya were were ọtụtụ afọ iji zụọ ahịa e-commerce na ahịa brik na-ngwa agha. Azụmaahịa ọha na eze bụ akụrụngwa na ebumpụta ụwa akabeghị aka, ọ ga - ewekwa oge maka ya ịma aka eluigwe na ala na - eme njem nke ọma na e-commerce aghọọla taa.
Okwu ndị a dị ọtụtụ, na enwere ike ịkọwa mkparịta ụka dị ukwuu, mana na ọkwa nnukwu foto, nke a bụ isi ihe isii kpatara na azụmaahịa mmekọrịta mmadụ anaghị eme n'ụzọ buru ibu:
A na-arụrịta ụka gbasara ihe azụmahịa obodo bụ. Ọ bụ Ahịa Facebook? Ọ bụ ngwa dịka OfferUp na Hapụ, nke yiri ka ọ bụ naanị ịchụpụ nkume craigslist? Ọ bụ ndenye aha na ndị nọ n'ọrụ na Nwachukwu? Ọ bụ naanị mgbasa ozi na netwọk mmekọrịta? Ọ na-ekere òkè gị eBay ndepụta na ntanetị mgbasa ozi gị? Tupu azụmahịa ọha na eze apụ, ọ ga-emepe ụlọ ndọda. Amazon na eBay bu ebe ahu na e-commerce. Onweghi ihe yiri ya ma na azụmahịa.
Ndị ahịa anaghị achọ ya. Ihe karịrị pasent 50 nke ndị na-azụ ahịa e-commerce na-atụgharị atụgharị na Amazon na nke mbụ mgbe ha zụrụ ahịa na ntanetị. Nwere ike nzọ na eBay na-ewere nnukwu akụkụ ọzọ nke uche ahụ. Ego ole ka azụmahịa mmadụ na-enweta? Nwere ike nzọ na ọ bụghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ijeri na eBay na Amazon ọnụ na-akọ dị ka ntọala ndị ọrụ nke ndị na-azụ ahịa na-arụsi ọrụ ike.
Ahụmahụ ịzụ ahịa — na nhọrọ — ka njọ. Dị ka onye na-azụ ahịa, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ eBay na Amazon.com, ị nwere ike ịzụta ihe ọ bụla maka ire ere ebe ọ bụla n'ụwa. Na azụmahịa azụmaahịa, nhọrọ ngwaahịa na ndị na-ere ere ka pere aka, ị ga-apụkwa ụzọ iji chọta ha, na-agafe ọtụtụ saịtị na akụrụngwa. Ọ bụ nsogbu ọkụkọ na akwa: obere ngwaahịa pụtara ndị na-azụ ahịa na obere okporo ụzọ-nke pụtara ndị na-ere obere-nke na-azụ nsogbu ahụ. Ugbu a, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ahọrọ ịre ebe ọtụtụ ndị na-azụ ahịa nọ, nke pụtara na ọ bụ ebe ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị ahụ dị.
Ndị na-azụ ahịa enweghị ike ịme azụmahịa na azụmaahịa mmadụ n'echeghị echiche. E-azụmahịa nwere ọnụọgụ ahịa na usoro ntụgharị gaa na sayensị. Amazon Prime bụ ihe atụ kachasị mma ebe a, mana eBay emeela nnukwu ọganihu na afọ ndị a. Ndị na-azụ ahịa nwere ike ịzụta isi ihe n'ọma ahịa n'ebumnuche, na-enweghị esemokwu - mana ugwu ịrị ugwu iji chọta ngwaahịa, ghọta usoro azụmahịa, na mezue azụmahịa azụmahịa na-adịkarị elu ma enweghị amụma. Nke ahụ pụtara ọnụọgụ ntụgharị dị ala nke ndị na - ere ere — site na ọdọ mmiri na-adịkarị ntakịrị
Nsogbu azụmahịa na-akpata snowball n'ụzọ dị mfe karị. Na eBay ma ọ bụ Amazon, nkọwa ikpeazụ ọ bụla nke azụmahịa ahụ-nyocha nke ndị na-ere ahịa, nkwenye iwu, mmezu mmezu, nlọghachi na mgbanwe, esemokwu na esemokwu esemokwu-na-edozi nke ọma yana site na otu, etiti etiti enwere ike ijikwa naanị ole na ole clic. Ọtụtụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ nọọrọ onwe ha etinyewo ọsụsọ na dollar ka ha wee gbalịa ịsọ mpi na ọkwa larịị, yana ezi ihe kpatara ya - ọ na-adọta ndị na-azụ ahịa dị ka azụmaahịa onye ọ bụla. Na azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, iwu ọdịda anyanwụ ọhịa ka na-adị ire, dị ka etinyere na eBay na 1999. Maka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere, nke a abụghị atụmanya na-adọrọ mmasị.
O siri ike imeri nchegbu banyere ihe nzuzo. Nchegbu nzuzo maka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-abawanye na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ gaghị efunahụ ha -elekọta mmadụ na-abụkarị mkpirisi maka nakọtara data m ma jiri ya maka uru. Maka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa, azụmahịa azụmahịa na-ada ụda dị ka obere nzuzo, nsogbu ka ukwuu. Ọ ga - ewe oge, akụrụngwa, evolushọn, na ọha na eze maka iwepụ nsogbu ndị a. Ka ọ dị ugbu a, ndị na-ere ahịa na-eche na ha ga-emetụta ọnụọgụ mgbanwe nwere ike ịbụ eziokwu.
Zụ ahịa ka bụ ọrụ pụrụ iche. Nke a nwere ike ịdị ka ihe doro anya ikwu, mana imirikiti ndị ọrụ mgbasa ozi anaghị adị njikere ịgwakọta mmekọrịta na ịzụ ahịa. Ha emebeghị ya mbụ, enweghị iwu ma ọ bụ omume ọ bụla ị ga-eme ka ndị ọrụ soshal midia chee echiche banyere ịzụ ahịa ka ha na ha na-akpakọrịta-ma ọ bụ na nke ọzọ. Ndị na-azụ ahịa enwebeghị naanị -elekọta mmadụ uche mgbe ahia ma obu a shopping n'uche mgbe ị na-akpakọrịta. Ọ ga-ewe ọtụtụ afọ tupu ha amalite ọgbakọ a.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa onye na-eche ma ọ bụ na ị bụghị kwesịrị be n'ahịa azụmahịa, atụla egwu. Maka ebumnuche ndị a, enwere ike ị gaghị efu ihe. Ma ọ bụ, n'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwere ike ị nweta ma ọ dịkarịa ala ihe dị ukwuu site na ịbawanye ụba na imeziwanye mgbalị gị na nnukwu ahịa, ebe ọtụtụ n'ime ndị na-azụ ahịa nọ, na ebe nchekwa na amụma maka ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa ka ukwuu.
Ya mere maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa, echiche kachasị mma n'oge a bụ ime ihe ị na-eme n'agbanyeghị-mejuo ndị ahịa, nye nnukwu ọrụ, bulie azụmaahịa gị nke ọma-werekwa omume ọhụụ ọ bụla ma ọ bụ lekwasị ahịa ọ bụla anya n'ime usoro ahụ. Ndị ọzọ ga-elekọta onwe ha.
Tags: amazoncraigslistanakpoebayahịa ahịa facebookhapụonyinyeazụmahịa azụmahịansogbu azụmahịa
Kevin North bụ Onye isi ala na onye isi ala nke Terapeak, ebe ọ na-ahụ maka ọhụụ ụlọ ọrụ, atụmatụ, uto ego na arụmọrụ azụmahịa.
Gini bu ihe isi SEO kacha elu na 2017?